Kolontsaina Info. About. What's This?
Kolontsaina ao aminny Repoblika Demôkratikani Kôngô
Fiteny hebreonny Misnà
Fanoharana ao aminny Evanjely
Ny kolontsaina ao Oganda dia fifangaroan ny kolontsainny foko isan-karazany ao amin io firenena io miampy ny kolontsaina avy any ivelany, izay mahakasika ny fivavahana sy ny fanabeazana sy ny fiteny sy ny sehatra maro hafa.
Ny Arabo dia ireo olona miteny arabo sady manana kolontsaina arabo avy ao aminny saikanosini Arabia ka miparitaka ao Afrika Avaratra sy ao Atsinanana Afovoany ary ao aminny saikanosini Arabia.
I Iràna Lehibe na ny Tontolo iraniana na Persia Lehibe na Persa Lehibe dia ny faritra izay itenenana ireo fiteny iraniana sy ireo faritra nikambana tao aminny Persia na ny Empira persiana. Misy ny mpanoratra mampiasa teny azo adika aminny hoe Kôntineta ara-kolontsaina iraniana na Kôntinenta ara-kolontsaina persiana ". Tsy nanana sisin-tany raikitra na oviana na ovina ny Tontolo iraniana sady tsy nanana famaritana mazava tsara. Misy anefa ireo mamaritra azy ho ny fitambaranny taninireto firenena ankehitriny ireto: i Afganistàna, i Azerbaijàna ary ireo repoblika ao Azia Afovoany. Ny hafa ind ...
Ny kolontsaina ao amin ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, izay ahitana mponina miisa any amin ny 86 000 000, dia ahafaha-mitaratra ny fahasamihafan ireo foko anjatony maro ao amin io firenana io sy ny fomba amam-panaony. Nanomboka tamin ny fiafaran ny taonjato faha-19 dia niova ny fomba fianan ny mponina vokatry ny fanjanahan-tany, ny tolona ho an ny fahaleovan-tena, ny Ady Lehibe voalohany sy faharoa. Na dia izany aza dia voatahiry aminny ankapobeny ny kolontsaina nentim-paharazana ao Kôngô.
Ny Firenena Mikambana Misahana ny Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Kolontsaina na UNESCO dia fikambanana iraisam-pirenena sampananny Firenena Mikambana. Hoy ny UNESCO ny tanjona dia ny hanampy foana ny fiadanana sy ny filaminana. Tokony hanao izany aminny alalanny fifanampianny firenena, aminny alalanny fanabeazana, ny siansa ary ny kolontsaina. Izany dia natao hanampiana ny firenena hafa hanaraka ny fanjakana tan-dalàna sy ny zonolombelona. Manampy izany ihany koa mampirisika ny fahafahana sasany izay ao aminny Dinanny Firenena Mikambana.
Ny dragona dia zavaboary manan-tantara lehibe sy bibilava hita any aminny tantaram-piainanny kolontsaina maro manerantany. Ny finoana ny dragona dia samy hafa be aminny faritra rehetra, fa ny dragona aminny kolontsaina andrefana hatraminny taona afovoany dia matetika no naseho ho toy ny elatra, manana tandroka ary efatra tongotra ary afaka miaina afo. Ny dragona aminny kolontsaina atsinanana dia matetika no aseho ho zavaboary bibilava tsy misy elatra sy tongotra efatra ary manam-pahaizana amboninizay.
Ny Azteka dia kolontsaina mesoamerikana izay niroborobo tany afovoani Mexico taminny vanim-potoana taorianny kilasy hatraminny taona 1300 ka hatraminny 1521. Ny vahoaka Azteka dia nahitana foko isan-karazany tao afovoani Mexico, indrindra ireo vondrona izay nahay ny fiteny nahoatl sy izay nanjakazaka lehibe ampahany aminny Mesoamerika taminny taonjato faha-14 ka hatraminny faha-16. Ny kolontsaina Aztekana dia natsangana ho fanjakana-tanàna, ny sasany izay nanatevin-daharana ny fifanekena, ny kaonfederasiona politika, na ny fanjakana.
Ny fiteny grika kôine na grika kôine na grikanny Baiboly dia endriky ny fiteny grika izay notenenin ny olona tamin ny vanimpotoana sy tontolo nanjakan ny kolontsaina grika ary nampanarahim-penitra tamin ny vanimpotoana nampiroborobo ny kolontsaina grika. Tsy ny Grika ihany no nampiasa io fiteny io fa ny hafa firenena izay nandray manontolo na ampahany ny kolontsaina grika na ireo olona te hampita ny heviny tamin ny olona samihafa firenena tamin izay. Avy amin ny endrika iôniana-atikan ny fiteny grika izay nisisihan ny endrika hafan ny fiteny grika ny fiteny grika kôine. Tamin io fiteny io ...
Ny zana-kôntinenta indiana dia faritra ara-jeôgrafia ao Azia Atsimo, mirefy 4 500 000 km 2 any ho any, izay ahitana an i India, i Pakistàna, i Bangladesy, i Nepaly, i Botàna, i Srilanka ary ireo nosy Maldiva sy ampahan-tanin izy ireo sy ampahan-tany fehezin i Sina ankehitriny. Misy mponina 1 800 tapitrisa any ho any ny ao amin ny zana-kôntinenta indiana, ka ny 1 400 tapitrisa dia monina ao India: izy no faritra eto amin ambonin ny tany be mponina indrindra, izay onenan ny iray ampahefatry ny mponina maneran-tany. I Birmania koa indraindray dia tafiditra ao amin io zana-kôntinenta io nefa a ...
Ny vondrom-poko na foko dia vondron olona mihevitra ny tenany ho iray razana, iray tantara sy fedrà, iray kolontsaina, iray fiteny na fitenim-paritra, iray fomba fiainana. Mety ho ny sasany amin ireo singa famaritana ireo ihany no amaritana ny foko na ny vondom-poko na ireo singa rehera ireo. Ny maha isan ny foko iray ny olona iray dia mifamatotra amin ny fananana kolontsaina iraisana, ka isan izany ny lovantsofina izany, na ny fomba amam-panao, ny anjara asa sahanina eo amin ny fiarahamonina, ny fiaviana ara-jeôgrafia, ny foto-pisainana, ny fivavahana, ny fomba fahandroana sakafo, ny fita ...
Ny reggae dia karazana mozika nisandratra taminireo taona 1960, vokatry ny fifangaroanny mozika ska sy calypso niaraka aminny blues sy ny rock and roll, mozika be mpitia indrindra aminny mozika jamaikana. Lasa mozika malaza eran-tany ny reggae izay matetika tafaraka aminny kolontsaina rastafary. Rehefa miresaka reggae dia matetika tonga ao an-tsaina ny fihetsiketsehana rastafary izay nipoiitra koa avy ao Jamaika. Misy anefa ireo Rasta, toy ny fihetsiketsehana Bobo Shanti, izay tsy miombon-kevitra aminizany. Na dia izany aza dia mitonon-tena ho rasta ny ankamaroanireo mpihira reggae, noho n ...
Ny lalàn i Mosesy na lalàn i Môizy, izay hafohezina indraindray amin ny hoe Lalàna, dia fitambaran ny fitsipika sy fampianaraha tokony harahina nomen Andriamanitra ny vahoakan i Israely tamin ny alalan i Mosesy, izay voadoratra ao amin ny Torah. Ny lalàn i Mosesy dia nomen i Iahveh ny Israelita, araka ny Bokin ny Eksodosy na Eksaody Eks. 19.5-6. Ny lalàn i Mosesy dia miantso ho amin ny firahalahiana eo amin ny samy Israelita na samy Jiosy izay mitandrina ny lalàna. Mametraka ny fototry ny kolontsaina jiosy taloha izay manome lanja ny samy Jiosy izany.
Ny jodaisma rekonstroksionista no firehanny jodaisma progresista niforona farany indrindra sady ahitana mpino farany vitsy indrindra. Taminny taona 1968 tao Etazonia no niforonany ka ny raby Mordechai Kaplan no nanorina izany taminny fotokevitra nipoitra taminireo taona 1920 sy 1930 ary 1940. Ao Etazonia sy ao Kanada no tena ahitana ity firehanny jodaisma ity. Ity firehana manaraka toetrandro ity dia mampianatra fa ny jodaisma dia sivilizasiona tsy mitsaha-mivoatra. Tao aminny sampana an-kavanana indrindra aminny jodaisma mpitahiry, talohanny hielezany, no nipoiranny jodaisma rekonstroktio ...
Ny fanindrahindram-pirenena, dia ny fomba fisainana izay milaza fa isaky ny foko ny olona dia tokony ho afaka hanapaka mihitsy. Ny fiheverin’izy ireo dia: Tsara kokoa izao tontolo iza rehefa betsaka ny fahasamihafana ara-kolontsaina. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny fananan’ny foko ny fireneny ary ny fiaraha-moniny ka afaka mitondra ny tenany tsy misy fehy na fampahoriana. Ny fanindrahindram-pirenena dia ny fomba tsara indrindra fanavotana vondron’olona kely fa tsy matanjaka, izay mirahona amin’ny fampifangaroana ny foko.
Ny arkeôlôjia dia taranja ara-tsiansa anaovana fikarohana momba ny kolontsaina sy ny fomba fiainan ny olona tamin ny andro lasa amin ny alalan ny zavatra azo tsapain-tanana sisan ny lasa, hatramin ny vanimpotoana talohanny tantara ka hatramin izao andro ankehitriny izao. Misahana manontolo ny zavatra rehetra sisan ny lasa izy ankehitriny: hatramin ny sangan asa kanto ka hatramin ny toerana fanariana fako, hatramin ny taolana tranainy ka hatramin ny vovo-boninkazo; misahana ny vanimpotoana rehetra: hatramin ny niandohan ny olombelona ka hatramin izao vanimpotoan ny taozava-baventy; ary misa ...
Ny fampianarana, dia manan-tanjona ny mampitombo ny fahaizanny mpianatra aminny alalanny fifandraisana an-tsoratra na am-bava. Ny mpampianatra, ao aminny fianarana ankehitirny dia mampianatra mba hampita ny fahaizany. Ny olona rehetra dia manana zo hianatra, na dia izany aza dia misy ny fampianarana maimaimpoana ary misy ny andoavam-bola. Ny tanjonny fampianarana dia ny: Hampivelatra ny fahalalana ara-tsaina, ny fahaizana, ny talenta voajanahary. Hanamafisana ny fifandraisana ara-tsosialy. Hisorohana sy hitondrana ny tsy fitoviana ara-batana, ara-tsaina, ara-kolontsaina ary ara-piaraha-mon ...
Ny fiteny hebreonny Misnà na fiteny hebreo misnaika na fiteny hebreo misnika dia endriky ny fiteny hebreo iray mifanandrify aminny fotoana feranny taonjato volohany sy faha-5 taor. J.K. izay mifanandrify koa aminny fotoanny Talmoda. Atao hoe hebreo rabinika na fiteninny Olonkendry koa ity fiteny ity. Fiteny nampiasaina taminny fiainana andavanandro sy tao aminny literatiora jiosy izy io, araka ny hita aminireo tahirin-tsoratra hitanny arkeologa tao Israely. I Abraham Geiger no nanomboka nanao fanadihadiana ara-kaifiteny taminizy ireo taminny taona 1845. Ny hebreo misnika dia ahitana zava-b ...
Ny Evanjelin i Nikôdemo, na Filazantsaran i Nikôdemosy, sy ny Asan i Pilato dia anaran ny evanjely apôkrifa nosoratana amin ny teny grika tamin ny taonjato faha-4. Ao amin ny endriny voalohany dia mitantara ny fitsarana sy ny fahafatesan i Jesoa izy, avy eo ny fitsanganany tamin ny maty. Ampahatsiahiviny ny evanjely kanônika sady manamafy ny fahatanterahan ny faminanian ny Testamenta Taloha izy. Ao amin ny fandikana an io evanjely io amin ny teny latina dia notovanana ny fitantarana ny fidinan i Jesoa tany amin ny fiainan-tsi-hita. Nisy akony teo amin ny kolontsaina tandrefana ny Evanjelin ...
I Jodasy Makabeo na Jodà Makabeo dia mpisorona isanireo atao hoe Kohena, zanaka fahatelo sady mpandimby ani Matatià rainy taminny fitarihana ny fikomianny Jiosy hanohitra ny mpanjaka seleokida Antiokosy IV Epifanesy, izay nanazimbazimba ny Tempoly jiosy, sy niady taminny Jiosy mankasitraka ny fampivoarana ny kolontsaina jiosy aminny fampifangaroharoana azy fomba grika. Isanireo mpitari-tafika nalaza teo aminny tantaranny Jiosy izy izay nahataona lehilahy mpiady anarivony ka nandresy ny tafika siriana taminny ady nifanaovany taminny taona 166 sy 165 tal. J.K. Atao hoe יהודה המכבי / Yehudah ...
Ny Dekapolisy na Dekapoly dia tanàna folo taloha hita indrindra ao atsinanani Jordàna, izay mivondrona ho fikambanana iray. Avy aminny teny grika hoe deka sy polis io anarana io. Atao hoe Δεκάπολις / Dekápolis, ireo tanàna ireo aminny teny grika. Mety mpijirika grika sy mekedoniana no nanorina ny Dekapolisy faha mpanjaka seleokida Antiokosy III. Taty aoriana dia nizaka ny fifaninanana taminireo tanàna jiosy sy nabateana izy ireo taminny faharavanny fanjakana seleokida. Ny fanatsarana ny fifandraisana ara-barotra sy ny fifampiarovana aminny fahavalo no niteraka ny fiombonanireo tanàna folo ...
Ny fanoharana ao amin ny Evanjely dia tantara anoharan-javatra nataon i Jesoa avy any Nazareta izay manolotra fampianarana ara-pitondrantena sy ara-pivavahana. Amin ny teny grika dia atao hoe παραβολή / parabolê izany. Amin ny fomba fanaovana fanoharana voarakitra ao amin ny kolontsaina jiosy dia natao hanehoana fahamarinana amin ny alalan ny zavatra mpitranga eo amin ny fiainana andavanandro na amin ny alalan ny fandinihna ny zavaboary, tsy ny fampiharana an izany ho fampitam-pahaizana amam-pahalalana momba ny fivoasana ny Lalàna araka ny mahazatra ny Raby no tena nanaovan i Jesoa izany f ...
I Rôma Taloha dia sady ny tanànan i Rôma sy ny fanjakana naoriny tamin ny Andro Taloha. Tsy afa-misaraka amin ny an ny kolontsaina latina ny hoe "Rôma Taloha". Izany fitangoronan-tanàna madinika tamin ny taonjato faha-8 tal. J.K. izany dia afaka nanjakazaka amin ny faritra mediteraneana mantolo sy amin i Eorôpa Andrefana tamin ny taonjato voalohany hatramin ny taonjato faha-5 tamin ny alalan ny fakàn-tany nataon ny miaramila sy tamin ny alalan ny fampidirana ny olomanga isan-toerana ho isan ny vahoaka rômana. Namela sisan-javatra maro sy vavolombelona amin ny asasoratra ny fanjakazakan i R ...
Kolontsaina ao amin ny Repoblikan i Kôngô
Kolontsaina ao amin ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô
Ny kolontsaina ao amin ny Repoblikan i Kôngô dia kolontsaina manan - karena izay iainan ny mponina 5 000 000 any ho any tamin ny 2017 noho ny fananan
voalohany amin ny herinandro. Ny Malagasy talohan ny fidiran ny kolontsaina arabo sy ny kolontsaina tandrefana dia nisy nanao ny Alakamisy ho andro voalohany
taona 175 sy 140 tal. J.K., nanoherana ny fampidirana kolontsaina grika ao amin ny kolontsaina jiosy sy niadian ny Jiosy mpandala ny fomban - drazana tamin ny
ankehitriny, io irery no lovan ny Portogaly any amerika, amin ny fisehon ny kolontsaina sy ny teny ofisialy, ny teny portogey. Firenena katôlika sy miteny portogey
isan i Azia Afovoany sy i Vietnamy sy i Singaporo noho ny antony ara - kolontsaina atambatra matetika amin i Azia Atsimo - Atsinanana ny faritra rosiana
tantaram - piainan ny kolontsaina maro manerantany. Ny finoana ny dragona dia samy hafa be amin ny faritra rehetra, fa ny dragona amin ny kolontsaina andrefana hatramin ny
amin ny tapany avaratr i Eorôpa izay ahitana ireo firenenena manana ny kolontsaina sy ny fiteny skandinavy Nôrvezy, Danemarka, Soeda sy Islandy ary ny
tamin ny taona 1991. Na dia ao amin ny kontinentan i Azia aza i Armenia dia heberina ho isan i Eoropa ara - kolontsaina sy ara - tantara ary ara - politika.
Ny Azteka dia kolontsaina mesoamerikana izay niroborobo tany afovoan i Mexico tamin ny vanim - potoana taorian ny kilasy hatramin ny taona 1300 ka hatramin ny
nahatonga azy ho tanàna lehibe ary manan - karena amin ny lafiny ara - kolontsaina ao amin ny faritra misy azy Azia Andrefana Nandritra ny taona nanjakan
tontolo nanjakan ny kolontsaina grika vanimpotoana helenika ary nampanarahim - penitra tamin ny vanimpotoana nampiroborobo ny kolontsaina grika. Tsy ny Grika
Tananan i Madagasikara Governemanta malagasy Politika ao Madagasikara Kolontsaina malagasy Fivavahana eto Madagasikara Fiteny eto Madgasikara Faritra eto
Andro iraisam-pirenenny teny nibeazana
Ny andro iraisam-pirenenny teny nibeazana dia nambaraini UNESCO ny 21 Febroary 2000, ary ankalazainny firenena mpikambana aminio daty io mba hanohana ny fahasamihafana ara-piteny, ary ara-kolontsaina.
Kolontsaina ao aminny Repoblika Demôk ..